Malunga nathi -Shenzhen Keja Optoelectronic Co., Ltd.
Sijonge ukuseka ubudlelwane obuxabisekileyo kunye neenkampani ezijolise phambili ekuphumezeni imeko yokuphumelela.
Ukuza kuthi ga ngoku, uKeja Optoelectronic uphuhlise waba ngumenzi wesikhuseli esikhulu esikhulisiweyo kunye nomzi-mveliso we-15,000 M2, 2000 M2 yocweyo lokusebenzela ngaphandle komgangatho kunye nomgangatho ophakanyisiweyo, ngaphezulu kweentonga ezingama-300 kunye neziqwenga ezingama-300 zezigidi zokwenza imveliso ngenyanga. Sineefektri ezi-2 e-Shenzhen (esingaphantsi komkhuseli wesayizi ye-intshi eyi-7) kunye ne-Dongguan (enkulu kune-7 intshi yesikhuseli). Ukuphuculwa komgca wokuvelisa okuzenzekelayo kunye nokupakisha umgca kuzisa umgangatho ozinzileyo, ukusebenza okuphezulu kunye nexesha elifutshane lokukhokela kunabakhuphiswano.
I-Keja Optoelectronic isebenzise ngokupheleleyo inkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001, kwaye kwangaxeshanye iphumeza i-ERP, i-OA kunye nezinye iinkqubo zolawulo lolwazi kwimveliso ukuqhubeka nokuphucula ukusebenza kolawulo. Zonke iimveliso zifumene i-UL, i-SGS kunye nezinye i-FCC ezigunyazisiweyo zamazwe aphesheya, izatifikethi ze-RoHS.
Inkampani iyaqhubeka nokuphonononga imakethi yamanye amazwe kwaye izimisele ukubonelela abathengi ngeemveliso eziphambili, izisombululo zobugcisa kunye neenkonzo eziphezulu. Iimveliso zithengiswa ikakhulu eYurophu, eUnited States, eJapan, eMzantsi Korea nakwezinye iimarike. Ukongeza kwimveliso ephezulu yasekhaya, njenge-VIVO, ESR, i-GREEN UNION, i-MINISO, abathengi abaphambili kukubandakanya i-Soft Bank (eJapan), i-SGP (South Korea), i-ZAGG (i-USA), njl.
I-Keja Optoelectronic ihambelana nokuhlaziywa kwe-craze eziswe ngumthengi itekhnoloji yemveliso kunye nokuphuculwa kwemveliso, inyusa i-R & D kunye nokuyila, iyaqhubeka nokubonelela ngemveliso yezikhuselo eziphezulu kunye nezisombululo zezixhobo zeselfowuni, kunye nokuseka ubudlelwane obubaluleke ngakumbi phambili Ukujonga inkampani yophawu ukufezekisa imeko yokuphumelela.
Umbono wethu: Ukuze ube ngumzi mveliso wecandelo lezesekeli kwiimveliso zodidi lokuqala kunye neenkonzo zamashishini
Umsebenzi wethu: Wonke umntu "Keja" makabe nesidima kunye nexabiso
Ixabiso lethu: ukuthembeka, uxanduva, ukuncedisana, amabhongo
Ifilosofi yethu: Ukukwazi ukufunda kulingana nokukhuphisana.
Inkcubeko yethu yenkampani: ulwazi, ukusebenza ngokukuko, ukonwaba, ukuxabisa.